ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ခေါင်းစဉ် မတပ် တတ်သော ပို့ စ်
Posted by ကြည်ကြည် at 4:51 AM
တာမွေမီးပွိုင့်မှာ ကိုယ်တွေ့ကြုံလာတာလေးပြောရအုံးမယ်။ နေ့လည် နေက ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေလို့ တောင်းတဲ့မိန်းမတွေတောင်ကြာကြာမရပ်နိုင်ဘူး၊ မိန်းမတစ်ယောက်က အရမ်းပူလာရင် တိုက်ရိပ်ကလေးထဲဝင် ကလေးကို နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်း၊ နောက်တစ်ယောက်ကထွက်နဲ့ လူကြီးတွေပဲ လဲတယ်။ ကလေးကမလဲဘူး။ ကလေးလေး ဘယ်လောက်သနားဖို့ ကောင်းလဲဆိုတာ။
seesein March 6, 2011 at 6:53 AM
ငိုချင်းသည်ကျောက် March 6, 2011 at 8:07 AM
ရန်ကုန်ကဘိုကလေးဈေးနားမှာ ပင်စင်စားအဖိုးကြီးတွေ အဖွားကြီးတွေ အိမ်က အိမ်သုံးပစ္စည်းတပတ်နွမ်းလေးတွေ ချရောင်းနေတာမြင်ရတာ မိဘချင်းစာနာစိတ်နဲ့ ဝမ်းနည်းလိုက်တာ..အင်း..လူတွေရဲ့ ကံပေါ့လေ...ကိုကြီးကျောက်အဖေနဲ့အမေတို့ ရတဲ့ ပင်စင်က သူတို့တလစားနိုင်ဖို့နေနေသာသာ..ဘဏ်ကို ပင်စင်သွားထုတ်တဲ့ ခရီးစားရိတ်တောင်မရှိပါဘူး..ကိုကြီးကျောက်တို့ ညီအကိုတတွေက ပြည့်စုံကြတော့ သူတို့မှာမပူမပင်နေရ၊ လှူရတန်းရတာကလား၊ အဲဒါတွေမြင်လို့ သားမရှိမယားမရှိကိုကြီးကျောက်လဲ ဗမာပြည်ကို စွန့်ခွာခဲ့တာ၊ ပင်စင်ယူရင် စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဘဝကို ကြီးတောင်ကြီးမားရောက်မှ မကြုံချင်တော့ဘူး..
ကလေးဘုစုခရုနဲ့လာတောင်းတဲ့မိန်းမတွေတော့ ခနခနကြုံဘူးတယ်၊ အရင်ကတော့ ကိုကြီးကျောက်က သူတို့ကို ပြောတယ်..ငါတောင် တယောက်စာအနိုင်နိုင်မို့ မိန်းမ မယူရဲဘူး..ကလေးမမွေးရဲဘူး..နင်တို့မယ် ဘာမှ ရေရေရာရာမရှိပဲ ဘာကိစ္စ ကလေးတွေမွေးနေတာလဲ လို့ပြောပြီးမှ နောက်မှစဉ်းစားမိတယ်...သူတို့မှာက အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲရှာလေတော့ နောက်ဆုံးကြံရာမရတောင်းစားနေကြတာပဲလေဆိုပြီး တွေးမိပါရဲ့..
အင်း....ကိုကြီးကျောက်လဲ မထူးပါဘူး ခုတော့ မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်အောင် ကျန်းမာရေးက မပြည့်စုံတော့ တောင်းစားနေရတာပါပဲ၊ ဒီမှာတော့ လကုန်ရင် ကိုယ့်ကဒ်ထဲ ငွေဝင်လာတော့ ဣနြေ္ဒတော့ရတာပေါ့လေ..
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! March 6, 2011 at 12:09 PM
Sint Si March 6, 2011 at 3:31 PM
It made me tear too.
ခနွဲ March 6, 2011 at 7:35 PM
sosegado March 6, 2011 at 10:05 PM
မီးပုံပျံ မတော်တဆလွဲချော်ပြီးကျလို့ မြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့ လူစွန့်စားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီး ၁၉ ရာစုအတိုင်းရှိတဲ့နေရာလို့ မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်၊ အဲဒီကနေ နောက်တော့ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေကို လေယာဉ်ပျံစီးလုံးလိုက်ခေါ်ခေါ်လာကြတာ စီးပွားတော်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်၊
တောင်းစားတဲ့သူတွေကို မဝေဖန်ပါဘူး၊ အဓိကက ငွေရဘို့ …….လောကမှာနည်းမျိုးစုံနှင့်တောင်းစားနေတာကိုး ……………….
Kay March 6, 2011 at 10:50 PM
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ဆိုပြီး.. လွမ်းစရာ..သနားစရာ..မုတ်သုန်မိုး တွေ စိုရွှဲ တုတ်တုတ် ကျ နေတဲ့.. အမိနိုင်ငံလေး ထဲက..လွမ်းစရာတွေ ကို လွမ်းသွားတယ်..ကွယ်..
ကြည်ကြည် March 7, 2011 at 12:34 AM
ကူပြီးလွမ်းသွားတဲ့ ချစ်သောအမ. ညီမ အကို မောင် များအား ကျေးဇူးပါ ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 7, 2011 at 9:59 AM
မကြည်ကြည်ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း မျက်ရည်ကျမိပါတယ်.
နာဂစ်ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်က ကြုံခဲ့သလို အဲဒီဒေသကိုလည်း ရောက်ခဲ့သူမို့ သူတို့တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို တကယ်နားလည်မိခဲ့ပါတယ်.. နှလုံးအိမ်ကို ရိုက်ခတ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ တွေ့တိုင်းလည်း မျက်ရည်မခိုင်ပါဘူး
တကယ်လို.ပေါ.တတ်နိူင်ကြမယ်ဆိုရင်လေပင်စင်စားတွေလခထုတ်တဲ.နေ. တွေမှာဘဏ်တွေမှာစောင်.ပြီးတဦးချင်းစီ သွားလှူကြရင်ကောင်းမယ်နော်